M2 अर्को म्याकबुक प्रो को लागी उत्पादन मा जान्छ म म्याकबाट हुँ
यो नन स्टप हो। एप्पलको विशाल मेसिनरी भने रोकिदैन यदि हामी अझै विश्वव्यापी महामारीको बिचमा छौं। हामी अझै नयाँ आश्चर्य एप्पल सिलिकन M1 प्रोसेसर प्रदान गर्दछ आश्चर्य को खोजिरहेका छौं, र M2.
यस्तो देखिन्छ कि म्याकहरूको लागि एआरएम प्रोसेसरको दोस्रो उत्पादनको सामूहिक उत्पादन सुरू हुन्छ। यसैले जुलाईमा तिनीहरू पहिले नै निर्माण हुनेछन्, र नयाँमा भेला हुन तयार छन् मैकबुक प्रो गिरावट मा जारी गर्न। त्यसोभए यदि तपाईंले आफ्नो नयाँ म्याकबुक प्रो M1 को गतिमा तपाईंको भान्जा-भाइलाई हिचकिचाइरहनुभएको छ भने, सावधान हुनुहोस् किनकि केही महिनामा उसले M2 सुसज्जित एक किन्न सक्छ र उसले तपाईंलाई हिचकिचाउन सक्छ। कस्तो कपडा।
मा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार निक्की एशिया, एप्पल प्रोसेसरको अर्को पुस्ता, "M2" भनिन्छ, उत्पादन चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यस्ता प्रोसेसरहरूको उत्पादन लाइनहरू तुलनात्मक रूपमा ढिलो हुन्छ, त्यसैले उत्पादन सुरू गर्नुको मतलब अब चिपहरू ठूलो आपूर्तिमा उपलब्ध हुने छन् जुन महिनामा भेला हुने थियो। julio.
यसको मतलब तिनीहरू पतनमा सुरू हुने नयाँ म्याकबुक मोडलहरूमा सामेल हुनेछन्, सम्भवत म्याकबुक प्रोहरूको अर्को सुधारिएको लाइनको लागि, जुन दिनको उज्यालो देख्न सक्छ अक्टोबर यस वर्षको।
--कोर एम १ चिप आर्किटेक्चरले प्रभावशाली प्रदर्शन र असाधारण ब्याट्री जीवन प्रदान गर्दछ, पहिलो एप्पल सिलिकन म्याकबुकले अन्तिम गिरावटमा प्रदर्शन गर्‍यो। एप्पलले भर्खरै घोषणा गरेको उहि प्रोसेसरको प्रयोग गर्‍यो iMac y आईप्याड प्रो। जे होस्, चिपसँग केहि सीमितताहरू छन् जुन पेशेवर प्रयोगकर्ताहरूले दोस्रो जेनेरेसनमा फिक्स हुने आशा गर्छन्।
M1 जुन पोर्टको केहि छोटो छ
यी नयाँ म्याकबुकहरूको असेंबली ड्रइंगहरू हुन्।
विशेष रूपमा, M1 चिपले अधिकतम दुई पोर्टहरू मात्र समर्थन गर्दछ Thunderbolt र एकल बाह्य प्रदर्शन आउटपुट अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, गिरावटमा एप्पलले १13 इन्च डुअल पोर्ट थन्डरबोल्ट म्याकबुक प्रो M1 चिपको साथ जारी गर्‍यो, तर--पोर्ट १4इन्चको म्याकबुक प्रो इंटेल प्रोसेसरको साथ बिक्रीमा रहेको छ।
साथै, जबकि M1 चिपले अविश्वसनीय राम्रो उर्जा क्षमता र क्रुर शक्ति प्रदान गर्दछ, यसले सबै बेन्चमार्कमा उच्च-अन्तराल ईन्टेल म्याकलाई प्रदर्शन गर्दैन। विशेष रूपमा, M1 चिपको एकीकृत ग्राफिक्सले उच्च-स्प्याम iMacs वा म्याकबुक प्रोमा समावेश गरिएका समर्पित ग्राफिक्स कार्डहरूलाई प्रदर्शन गर्दैन। अपेक्षा यो छ कि M2 चिप (वा «M1X«) थप सीपीयू र GPU प्रदर्शन, थप थन्डरबोल्ट बसहरू थप गर्नुहोस्, र कम्तिमा दुई बाह्य प्रदर्शनहरू अनुमति दिनुहोस्।
M1 चिप को एक CPU को हुन्छन् C कोर र एकीकृत रैम आर्किटेक्चरको साथ एक--कोर GPU। पछिल्लो वर्ष, यो पहिले नै M8 को साथ सम्भावित उपस्थितिको बारेमा अफवाह थियो C कोर CPU हरू उच्च-अन्त म्याकबुकहरूको लागि लक्षित छन्। डेस्कटप म्याक्स, यस्तो ऊर्जा कुशल प्रोसेसर को आवश्यकता बिना, चिप डिजाइन को हुन सक्छ C कोर.
आजको रिपोर्टमा, निक्केईले भनेका छन् कि M2 ले CPU, GPU, र समान चिपमा न्यूरल इन्जिन एकीकृत गर्न जारी राख्नेछ। यद्यपि यो नयाँ प्रोसेसरको विनिर्देशहरूमा बढी विस्तारमा जान सक्दैन।
एप्पल को नयाँ मोडेलहरु तैयार भइरहेको छ अफवाह छ १-इन्च र १-इन्च म्याकबुक प्रो, नयाँ चेसिस डिजाइनमा एआरएम प्रोसेसरहरूको साथ, म्यागसेफे, एसडी कार्ड रिडर र एचडीएमआई पोर्टको फिर्ताको साथ।
यी सबैलाई धन्यवाद ज्ञात भयो निस्पंदन रिभिल ह्याकरहरूले बनाएको नयाँ म्याकबुक प्रोको ब्लुप्रिन्टहरूको। यदि अन्ततः एप्पलले ब्ल्याकमेलको लागि भुक्तान गर्दैन भने, हामी अझ बढि जान्न सक्छौं। हामी हेर्नेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » M2 अर्को म्याकबुक प्रोहरूको लागि उत्पादनमा जान्छ
ज़ूमले अधिक रमाईलो बैठकहरू सिर्जना गर्न इमर्सिभ दृश्य प्रकार्य थप्दछ